Vonoan’olona arahina herisetra: zazalahikely 4 taona sy ny reniny bevohoka maty voatsatoka antsy | NewsMada
Mirongatra izay tsy izy ny asan-jiolahy arahana herisetra, ao Toamasina. Mila ho isan’andro no andrenesana vonoan’olona sy tsatoka antsy. Zazalahikely iray vao efataona namoy ny ainy, afakomaly. Re koa fa tsy tana ny ain’ilay reniny mitondra vohoka, omaly tolakandro.
Nandriaka indray ny ra tao Analankininina Hopitalibe Toamasina , parisela 12/21-22, “carreau” faharoa, omaly talata tamin’ny 3 ora maraina. Olona roa indray namoy ny ainy ary renim-pianakaviana iray mitondra vohoka no mbola miady amin’ny fahafatesana ao amin’ny hopitaly manara-penitra ao Morafeno. Tokantrano iray izay mampiasa tovolahy natao mpamily mpanampy izay efa najanon’ny mpampiasa azy hatramin’ny nahavitan’ny fotoam-piotazana vokatra letisia lasa teo no nitrangan’ity vonoan’olona mahatsiravina ity. Mandra-pahitan’ilay tovolahy asa anefa dia notazonin’ny mpampiasa azy tao an-tranony ihany izy satria mpiavy rahateo izy. Nandritra izay fotoana izay anefa dia nisy hatrany ny lonilony sy hatezerana izay neritreretin’ireo mpampiasa azy mihitsy. Vokany, ny alatsinainy teo, tsy tao an-toerana ny raim-pianakaviana mpampiasa azy fa lasa namita iraka tany an-toeran-kafa. Ilay renim-pianakaviana sy ny zanany lahikely 4 taona no tao an-trano. Tokony ho tamin’ny 3 ora maraina raha mbola renoky ny torimaso izy mianaka dia nitsaitsaika moramora ilay tovolahy niditra tao amin’ny efitranon’izy mianaka niaraka tamin’ny antsy maranitra. Notsatotsatohany antsy tao izy mianaka. Maty tsy tra-drano ilay zazalahikely efa-taona raha mbola miady amin’ny fahafatesana ao amin’ny hopitaly manara-penitra kosa ilay renim-pianakaviana, saingy namoy ny ainy omaly hariva ihany ity renim-pianakaviana mitondra vohoka ity, raha ny vaovao farany voaray. Nitsoaka avy hatrany ilay tovolahy nahavanon-doza, saingy henon’ny fokonolona ny hikiaka sy antso vonjy tao amin’ilay tokantrano ka tonga namonjy izy ireo. Efa mandeha ny fikarohana ilay nahavanon-doza satria efa eo am-pelatanan’ilay raim-pianakaviana ny mombamomba ity mpiasa nivadika nanao asan-jiolahy ity.
Fatim-behivavy iray hafa hita tao Ambalamanasa…
Tovovavy sahabo ho 25 taona iray koa hita faty teo anoloan’ny tranona mpandraharaha iray ao Ambalamanasa mialoha ny hidirana ny seranam-piaramanidina, ny alatsinainy hariva teo. Raha ny angom-baovao hatrany, adina mpisakaiza no niantombohan’ity raharaha ity satria nifankatia ireo mpifankatia ka raikitra ny fifandonana teo amin’izy roa. Tsy nahazaka izany fifamaliana izany ilay tovolahy sakaizan’ilay tovovavy ka nolerany antsy ny tendan’ilay sakaizany. Tovolahy iray nandeha moto mihazo ny lalam-pirenena fahadimy no nahatsikaritra ny faharatran’ilay tovovavy ka niezaka niantso vonjy mba hamonjena ilay niharam-boina raha nitsoaka nandositra kosa ilay tovolahy nahavanon-doza izay nanao kasikety sy pataloa tapaka ambony lohalika, araka ny fitantaran’ilay vavolombelona nanatri-maso ny zava-nitranga. Noho ny fahaverezan-dra be loatra tamin’ilay tovovavy niharam-boina, tsy afa-niala teo amin’ny toerana nianjerany izy ary tapitra teo ny ainy. Mitohy kosa ny fikarohan’ny polisy ilay jiolahy nahavanon-doza.